Isifiso sabantu ukunikeza izilwane engcono kuphela ukuqonda, ngoba izilwane nge izibopho womuntu aluyona nje uthando, kuyinto efana ubudlelwane yemiphefumulo. Ngakho oshona esitolo, "Pet", noma yikuphi speculates host kungaba elungisiwe ezifana ukuthenga inja noma ikati kuka ukujabulisa kumngane oqotho. "Naturalki" bungase bube isidina, ngenxa yalesi sizathu, ngezinye izikhathi udinga ukushintsha ekudleni, isibonelo, ukuthenga ephelele inja ukudla. Akusiyo imfihlo ukuthi esikhathini sethu ukudla izinja iqukethe hhayi kuphela uhla oluphelele amavithamini, kodwa futhi kakhulu bumnandi izilwane. Uma ungaqiniseki ukuthi iyiphi ukuthenga ezomile cat ukudla, cela usizo umsebenzi zooservisa Inthanethi, kukhona uqiniseka uthole izincomo ukudla, banikezwe ubulili sesilwane, zohlobo, nokunye. Ungakwazi ukuthatha ukudla owomile noma ukudla okusemathinini, kodwa kungcono ukuthenga okuthile, nento ukuphulula ukudla efanayo wathatha ukuthungwa ehlukene kanye nokusungulwa. Kunjalo-ke nangobufakazi izinja. Ukuze ufunde indlela ukondla inja, badinga kuphela ufake isicelo, ecacisa yobudala lizalele.
Yini okufanele banake lapho uthenga izimpahla? Yiqiniso, izinga lokuphila kwabo, okumele abe ukuqinisekisile imibhalo. Noma yimiphi imikhiqizo: okuthunyelwe ukunwaya, ezinjengenyanga izilwane, amathoyizi amazwe kithi, kuncike isitifiketi. Ukuze ukhethe umkhiqizo elikhulu, sicela uthintane web-salon Illustrated ikhathalogu kwezimpahla. Iphuzu ebalulekile kulesi simo akuyona kuphela iqiniso navigation lula izinhlobo zezimpahla, Nokho, futhi kungenzeka search jikelele. Ngokwesibonelo, udinga amathoyizi. Faka igama kukholomu yangaphakathi yekhasi yokusesha kanye imizuzwana embalwa kamuva uthola isipho ngemigudu ekhona. Indlela elula kunazo ukubheka uhlobo lomkhiqizo. Ngakho amathuba okuthola umkhiqizo esithile kakhulu anda. Serious web-zoosalon ngokuvamile ubeka amanothi ewusizo sendlela ukukhetha awukudla izinja, nezinye izinto. Izihloko ezinjalo zingase aqukethe eningi ulwazi oludingekayo kanye ewusizo, ikakhulukazi, ukuthi ukondla inja phakathi nokugula. Adiliza nokukhetha lokho ncamashi ukudla ofanele isilwane sakho, wena awusoze yonakale uma uthenga niyolazi ncamashi okudingayo.
Wonke umnikazi inja ngezinye izikhathi ebhekene isidingo ukuthenga leash. Kunoma yikuphi esitolo isilwane kukhona inqwaba ngezintambo ukuhlela kabusha, lo okudume kakhulu inayiloni noma ngezintambo lesikhumba okuhlala. Kodwa kukhona ngezintambo ukhululekile kakhulu izinja ngesimo roulette. Leash beztsennoy itheyiphu unekhono ukushintsha ubude leash njengomzali kuye ngesidingo. Plus, leash has a isibambo ukhululekile esingavunyelwe babancwebe ngu master isandla. Ngaphambi kokuthenga omunye ngezintambo, umbono iningi kukhona esitolo izipesheli acoshe kukho jikelele. Lapho ngezintambo ezinjengenyanga ziyasetshenziswa, kubalulekile ukuba sinake girth nentamo lesilwane sakho sasekhaya. Ngaphambi kokuthenga a collar ngoba izinja, udinga ukuthatha ebalisisiwe Ubumnene ozithandayo. Ungathatha esebenzayo luminescent leash ukuthi izokhanyisa ebumnyameni futhi inikeza ikhono ukucacisa indawo inja.
Burmese ikati zohlobo: incazelo nemvelo, intengo
Yorkshire terrier: incazelo zohlobo. Inja kangcono ingane yakho
Okufanele Okuphakelayo Labrador? Indlela ukondla Labrador
Lingise nezinala Rosella: incazelo, ukunakekelwa ngokukhethekile kanye nokugcinwa
Incwadi Cash, izinhlobo zayo kanye layout
Izinhlobo ukucinana kwemigudu yokuphefumula, uphethwe nokuvimbela izifo
Velokreslo izingane - engumngane esingcono kakhulu sokuba abazali asebenzayo
Umphakathi weDemokhrasi, izimpawu zenkululeko
"Apraksin", Voronezh. Indawo yokudlela "Apraksin": Izibuyekezo ikhasimende